Ịtụkwasị obi n’akụnụba abaghị uru
E nweghị onye nwere ike ịgbapụta nwanne ya (7, 8)
Chineke ga-anapụta mmadụ n’ili (15)
Akụnụba agaghị anapụtali mmadụ n’aka ọnwụ (16, 17)
Maka onye na-eduzi abụ. Abụ ụmụ Kora.+ 49 Unu ndị niile, nụrụnụ ihe a. Unu ndị niile bi n’ụwa,* geenụ ntị, 2 Ma ndị ukwu ma ndị nta,Ma ndị ọgaranya ma ndị ogbenye. 3 M ga-ekwu ihe gosiri na m ma ihe,Ihe m na-atụgharị n’uche+ ga-egosikwa na m na-aghọta ihe. 4 M ga-aṅa ntị ka m nụrụ ilu. M ga-akọwa ilu m mgbe m na-akpọ ụbọ akwara. 5 Gịnị mere m ga-eji tụọ egwu n’oge nsogbu,+Mgbe ndị chọrọ ịgba m mgba okpuru ji ihe ọjọọ ha na-eme gbaa m gburugburu? 6 Ndị tụkwasịrị obi n’ihe ha nwere,+Ndị jikwa nnukwu akụnụba ha nwere anya isi,+ 7 E nweghị onye ọ bụla n’ime ha nwere ike ịgbapụta nwanne yaMa ọ bụ nye Chineke ihe a ga-eji gbapụta ya.+ 8 (Ụgwọ a ga-akwụ iji gbapụta ha* dị oké ọnụNke na e nweghị mgbe ha ga-akwụli ya). 9 Ha enweghị ike ịgbapụta nwanne ha ka o wee dịrị ndụ ruo mgbe ebighị ebi ma ghara ịbanye n’olulu.*+ 10 Onye ọ bụla na-ahụ na ndị ma ihe na-anwụdị anwụ. Ndị nzuzu na ndị na-enweghị uche na-ala n’iyi,+Ha ga-ahapụkwara ndị ọzọ akụ̀ ha.+ 11 Ihe ha chọrọ bụ ka ụlọ ha dịruo mgbe ebighị ebi,Ka ụlọikwuu ha dịrị n’ọgbọ niile. Ha agụọla ala ha aha ha. 12 Ma n’agbanyeghị na a na-akwanyere mmadụ ùgwù, ọ gaghị adịrị ndụ gawa.+ Ọ kaghị anụmanụ na-anwụ anwụ mma.+ 13 Ọ bụ ihe na-eme ndị iberiibe+Na ndị na-eso ha, bụ́ ndị ọnụ ha na-etu na-amasị. (Sila) 14 Ha dị ka atụrụ a ga-egbu egbu. Ha ga-aga n’ili.* Ọnwụ ga-edu ha otú onye na-azụ atụrụ si edu atụrụ ya. Ndị ezi omume ga-achị ha+ n’ụtụtụ. Ha agaghịzi anọ.+ Ha ga-ebizi n’ili*+ kama ibi n’obí eze.+ 15 Ma Chineke ga-anapụta m* n’ili.*+ Ọ ga-adọpụta m. (Sila) 16 Egwu atụla gị maka na mmadụ bara ọgaranya,Maka na ọ na-akpatakwu akụ̀ n’ụlọ ya. 17 N’ihi na e nweghị otu mkpụrụ ihe ọ ga-ewere ma ọ nwụọ.+ Akụnụba ya agaghị eso ya banye n’ili.+ 18 Ọ na-aja onwe ya* ike n’oge ọ nọ ndụ.+ (Ndị mmadụ na-eto mmadụ mgbe ihe na-agaziri ya.)+ 19 Ma n’ikpeazụ, ọ na-anwụ otú nna nna ya hà nwụrụ. Ha agaghịzi ahụ ìhè ọzọ. 20 Onye ọ bụla na-aghọtaghị ihe a, n’agbanyeghị na a na-akwanyere ya ùgwù,+Akaghị anụmanụ na-anwụ anwụ mma.
^ Ma ọ bụ “n’oge a.”